Yikuphi okusetshenziswayo kokulinganisa ama-EPCs nabathuthukisi abangakwenza ukukala ngempumelelo imisebenzi
NguDoug Broach, Umphathi Wezokuthuthukiswa Kwebhizinisi eTrinaPro
Njengoba abahlaziyi bezimboni bebikezela ukuthi imisila yomsila enamandla yelanga elisebenzisekayo, ama-EPC nabathuthukisi bamaphrojekthi kumele bakulungele ukukhulisa imisebenzi yabo ukuhlangabezana nalesi sidingo esikhulayo. Njenganoma yimuphi nje umsebenzi webhizinisi, inqubo yokwenza umsebenzi iza igcwele ubungozi namathuba.
Cabanga ngalezi zinyathelo ezinhlanu ukukala ngempumelelo imisebenzi yelanga:
Ukuthengwa okulula kokuthenga ngakunye
Ukusebenza kwesikali kudinga ukusebenzisa izici ezintsha ezenza ibhizinisi lisebenze kahle futhi lihleleke. Isibonelo, esikhundleni sokubhekana nenani elikhulile labaphakeli nabasabalalisi ukuhlangabezana nezidingo ezikhulayo ngesikhathi sokukala, ukuthengwa kungenziwa lula futhi kwenziwe lula.
Enye indlela yokwenza lokhu ifaka ukuhlanganisa yonke imodyuli nokuthengwa kwempahla kube yibhizinisi elilodwa lokuthenga indawo eyodwa. Lokhu kuqeda isidingo sokuthenga kubanikezeli nabathengisi abaningi, bese kuhlanganiswa ukuhanjiswa kwempahla nokulethwa kwempahla ngamunye wabo.
Sheshisa izikhathi zokuxhuma
Yize izindleko ezilinganiselwe zamaphrojekthi elanga ezilinganiselwe zikagesi (i-LCOE) ziqhubeka nokwehla, izindleko zabasebenzi zokwakha ziyanda. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezindaweni ezinjengeTexas, lapho eminye imikhakha yamandla efana nokuqhekeza kanye nokumba okuqondiswayo incintisana nalabo abafuna umsebenzi njengamaphrojekthi elanga asebenzayo.
Izindleko zokuthuthukiswa kwephrojekthi ephansi ngezikhathi zokuxhuma ngokushesha. Lokhu kugwema ukubambezeleka ngenkathi kugcinwa amaphrojekthi kusheduli nangaphakathi kwesabelomali. Izixazululo zelanga ezisetshenziswayo ze-Turnkey zisiza ukwenza ukuhlangana kwesistimu kusheshe kakhulu ngenkathi kuqinisekiswa ukusebenzelana kwengxenye nokuxhuma kwegridi okusheshayo.
Sheshisa i-ROI ngezinzuzo zamandla aphezulu
Ukuba nezinsizakusebenza eziningi ngesinye isici esibalulekile esidingekayo ukukala ngempumelelo imisebenzi. Lokhu kuvumela amathuba amakhulu okutshala kabusha inkampani ukuze ithenge imishini eyengeziwe, iqashe abasebenzi abasha futhi bandise izindawo.
Ukuhlanganisa ndawonye amamojula, ama-inverters kanye ne-single-axis trackers kungathuthukisa ukusebenzisana kwezinto futhi kuthuthukise ukuzuza kwamandla. Ukukhulisa ukuzuza kwamandla kusheshisa i-ROI, esiza ababambiqhaza ukwaba izinsiza eziningi kumaphrojekthi amasha okukhulisa amabhizinisi abo.
Cabanga ukulandela abatshalizimali bezikhungo ukuze uthole imali
Ukuthola abaphathi bezimali abafanele nabatshalizimali kubalulekile ekukhuleni. Abatshalizimali bezikhungo, njengempesheni, umshwalense nezimali zengqalasizinda, bahlala bebheke amaphrojekthi aqinile ahlinzeka ukubuya okuzinzile, okuhlala isikhathi eside "okufana nezibopho".
Njengoba ilanga elisebenzisayo liqhubeka likhula futhi linikeza izinzuzo ezingaguquguquki, iningi lalaba batshalizimali bezikhungo manje seliyibona njengempahla engaba khona. I-International Renewable Energy Agency (IRENA) ibike a ukukhula kwenani lamaphrojekthi wamandla avuselelekayo aqondile abandakanya abatshali bezimali bezikhungo ngo-2018. Kodwa-ke, lawa maphrojekthi abhekele cishe amaphesenti ama-2 kuphela otshalomali, okuphakamisa ukuthi ikhono lezimali lesikhungo alisetshenziswa kakhulu.
Bambisana no-all-in-one solution solution
Ukuzivumelanisa kahle zonke lezi zinyathelo zibe yinkqubo eyodwa engenamthungo kungaba enye yezingxenye ezinzima kakhulu zokulinganisa imisebenzi. Thatha umsebenzi omningi ngaphandle kwabasebenzi abenele ukuwusingatha wonke? Ikhwalithi yomsebenzi ihlupheka futhi nezikhathi zokugcina aziphuthelwa. Ngabe usebenza ngokuqasha abasebenzi abaningi kunenani lomsebenzi ozongena? Izindleko zabasebenzi ezingaphezulu kwemali ziyanda ngaphandle kwemali engenayo ukuzokhokhela lezi zindleko.
Ukuthola lelo bhalansi elilungile kuyakhohlisa. Kodwa-ke, ukubambisana nomhlinzeki wezixazululo zelanga elisebenza ngobunye kungasebenza njengesilinganisi esihle semisebenzi yokukala.
Yilapho i-TrinaPro Solution ingena khona. Nge-TrinaPro, ababambiqhaza bangadlulisa izinyathelo njengokuthengwa kwempahla, ukuklama, ukuxhumana kanye ne-O & M. Lokhu kuvumela ababambiqhaza ukuthi bagxile kwezinye izindaba, njengokuthola imikhombandlela eminingi nokuqedela amadili ukukala ukusebenza.
Hlola ibhuku lamahhala le-TrinaPro Solutions Guide ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi ungalinganisa kanjani ngempumelelo imisebenzi yelanga.
Lesi isitolimende sesithathu ochungechungeni olunezigaba ezine elangeni elisebenzisekayo. Phinda uhlole maduze isitolimende esilandelayo.